Zombane Scooters, Electric Bike, Carbon Fibre Electric Scooters - Motorow
electric Izikuta ubuke
Happy electric ubuke
ELECTRIC MOTORCYCLES ubuke
Njengoko uhlobo Nyova isithuthuthu ezintsha zombane, UWITGO S5 zamkela imfundiso entsha uyilo technology yolawulo cruise, nto leyo sisetyenziswa ngokubanzi iimoto, ngoko abasebenzisi emoto emhlabeni kunye scooter uya kungena kwisantya status rated. Ngapha koko, ukuba nee-app ukulawula cruise ezintsha, nto leyo eyenza kube ekrelekrele. Jonga ngesibetho ye ngaphezulu.
Smartphones lokujikeleza ekhohlo
Umothuko Absorption For Comfort
Ulawulo lokuhamba emanzini
Ultra-Light & aphathekayo
Buka Zonke Izikuta
UWITGO S6 kuyinto brand isithuthuthu omtsha zombane ezijoliswe abasebenzisi ephakamileyo zokukhwela unyamezelo. Le uyilo kuhlanganiswa ngamandla aphezulu amandla ebhetri, nto leyo ukuqinisekisa amade unako ukufikelela ukuya ku-70km. Ngokusekelwe kwi theory kuyilo zokusebenza, uzakhe uyilo kwisingxobo kwesihlalo enamavili, nto leyo ukukhulula ukudinwa abasebenzisi 'nokwandisa amava ekhwele isithuthuthu. Jonga ngesibetho ye ngaphezulu.
Njengoko imodeli lula, UWITGO A5 Ikhaphukhaphu ezincinane. Aluminium ingxubevange okanye carbon ifayibha izinto umzimba kungenziwa wakhetha ngabathengi. Ubunzima aluminium ingxubevange scooter na 7.5kg, ubunzima umzimba carbon ifayibha yi 6.3kg kuphela. Kulula ukuba ulisonge, kube lula ukuluqhuba, kwaye asihambelani kakhulu iihambo ezimfutshane. Jonga ngesibetho ye ngaphezulu.
Aluminium ingxubevange & Carbon Fibre
I UWITGO CF1 ukwamkela ingxubevange wemagniziyam njengoko isakhelo wayo, nto leyo ukukhanya ubunzima womelele ngamandla, oku kwenza ubunzima yonke ibhayisekile-30% ngaphantsi kwezinye market.The ibhayisekile yonke ngaphandle welding, nto leyo eyenza umphezulu ngakumbi noxhamla ubuncwane. Sebenzisa i brushless motor ultra-zingcakacile, ngaphantsi kwe-5% ilahleko amandla, nto leyo inokonga ngaphezulu amandla ukunciphisa nokudinwa ngexesha ekukhweleni.
Vula: 8:30 AM - Close: 17:30 PM
Motorow-Tech usoloko ukunikela ingqalelo enkulu ezintsha, ulawulo lomgangatho kunye neenkonzo zabaxumi. Professional for ngezithuthuthu zombane, e-Bikes, skateboards kunye hoverboards.
Bhalisa ku wethu USN Life newsletter
© Copyright - 2019-2020 : All Rights Reserved. Products Guide - iimveliso lifakwe - Tags Hot - Sitemap.xml - AMP Mobile